Ny Nosy Mergui, harena miafina ao Birmania | Vaovao momba ny dia
Ny Nosy Mergui, harena miafina any Birmania
Mariela Carril | | nosy, Myanmar
Burmese na Myanmar dia firenena iray Azia atsimo atsinanana miaraka amin'ny jeografia iray notahian'ny tontolon'ny tsara tarehy sy ny tantara politika nivangongo. Ny tontolo sy ny kolontsainy no nahasarika mpitsangatsangana nandritra ny taonjato maro, fa anio kosa dia hifantoka amin'ny a toerana manokana, tsy dia fantatra fa tena sarobidy.
Miresaka momba izany isika Mergui Archipelago, andiana nosy mahavariana ho milomano, milentika masoandro, snorkeling ary antsitrika. Sahy ve ianao?
1 Ny Nosy Mergui
2 Fizahan-tany any amin'ny Nosy Mergui
Ny Nosy Mergui
Ity vondrona nosy ity dia any amin'ny faritra atsimon'i Myanmar ary ampahany amin'ny Faritra Tanintharyi. Mihoatra noho ny Nosy 800 samy hafa habe izay miparitaka ambonin'ny rano ao amin'ny ranomasina Andaman, ampahan'ny ranomasimbe indianina mandro ny morontsirak'i Myanmar sy Thailand.
Zanaka nosy granita sy vatosokayamin'ny zavamaniry tropikaly, honko, ala mando, morontsiraka fotsifotsy, ny sasany misy vatokely sy haran-dranomasina maro amoron-dranomasina. Ireo nosy ireo dia lavitra ny lalan'ny fizahantany matetika, noho izany dia voatahiry saika ao izy ireo fanjakana voajanahary.
Noho izany, ny nosy sy ny ranomasina manodidina azy ireo dia samy manana ny zavamaniry sy ny biby mahafinaritra. Izany no nahatonga an'ity tranonkala ity a toeran-tseranana manokana hifandray megafauna, dugong na antsantsa trozona ohatra. Izy ireo dia ny tany misy trozona, trozona manga, orcas, feso feso amin'ny karazana isan-karazany, sns.
Misy ihany koa ny gidro, serfa, vorona tropikaly tsy tambo isaina amin'ny tanibe ... Na voajanahary sy tsara tarehy aza izy rehetra, tsy midika izany fa tsy tandindomin-doza ny faritra satria ny fihazana sy ny jono no tandindomin-doza lehibe indrindra, raha tsy manao be loatra ny governemanta hamaha azy.
Ny nosy lehibe indrindra amin'ny vondrona dia i Nosy Kadan Kyun, 450 kilometatra toradroa misy tendrombohitra 767 metatra ny haavony. Ity tendrombohitra ity no toerana avo indrindra amin'ny nosy rehetra, nosy izay ny mpiavy voalohany dia tantsambo malay tonga avy any atsimo. Ny marina dia saika tsy onenana izy ireo hatramin'ny taonjato faha-XNUMX, zara raha nisy Malay sy Sinoa nandalo, ireo izay sahy nitety ity jeografia sarotra ity.
Noho io antony io, ireo izay nitsidika ny nosy dia jiolahin-tsambo sy mpivarotra andevo, mandra-pahatongan'ny firongatry ny anglisy naka azy ireo tamin'ny tapany voalohan'ny taonjato faha-XNUMX, nandalina azy ireo bebe kokoa ary nanao sarintany. Ankehitriny ny mponina eo an-toerana dia mitondra ny anarana hoe Moken na gypsies an'ny ranomasina. Manaraka fomba fiaina nentim-paharazana izy ireo, natokana ho an'ny jono, miaina ao anaty sambony ...
Ny halavirana sy ny fahatsoran'ireo nosy dia tsy nampisaraka azy ireo tamin'ny tantara teo an-toerana nandatsa-dra. Raha ny marina dia ity faritra ity no iray amin'ireo ratsy indrindra tamin'ny fotoana ady an-trano Burma ary nisy famonoan'olona vitsivitsy nidina teo amin'ny tantara. Avy eo, Rahoviana no manomboka ny fizahantany any amin'ny Nosy Mergui? Amin'ny tapany afovoany 90 tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary aorian'ny fifampiraharahana misy eo amin'ny governemanta Myanmar sy ireo orinasa misitrika ao Phuket, Thailand.
Fizahan-tany any amin'ny Nosy Mergui
Amin'ny ankapobeny dia momba snorkeling, antsitrika ary morontsiraka. Tsy dia notadiavina ny nosikely fa mahagaga ny olona tia ireny fanatanjahantena anaty rano ireny. Ny fotoana mety indrindra hisitrihana eto dia amin'ny volana martsa sy aprily satria tsy dia misy rivotra sy maripana ambony kokoa izay mahatonga ny rano hadio kokoa. Manomboka amin'ny Febroary ka hatramin'ny Mey dia afaka mahita stingray ianao sy antsantsa trozona.
Manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Jolay ny rivotry ny morontsiraka dia mahery kokoa ary mety hisy aza ny rivodoza; raha mbola ny vanim-potoanan'ny orana dia manomboka amin'ny Jona ka hatramin'ny Oktobra. Ka ny fitsangantsanganana an-dranomasina dia tsy mandeha manomboka ny voalohan'ny volana Mey ka hatramin'ny voalohan'ny volana Oktobra. Raha misy fiovana tampoka amin'ny toetrandro mandritra ny fotoanan'ny mononta dia mahita fialofana any amin'ny nosy sasany.
Ok izao raha te hiditra ny nosy dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana ianao ary anisan'ny fitsidihana. Manakarama fitsangantsanganana ianao ary manana fahazoan-dàlana, tsotra toy izany izy io, saingy tsy mandritra ny alina ary matetika maharitra iray volana. Amin'izao fotoana izao amin'ny maha vahiny anao dia tsy afaka mandeha malalaka any amin'ireo nosy ianao ary misy fisafoana an-dranomasina sy izay rehetra manamarina ireo antontan-taratasy. Noho izany, ny safidy dia manakarama fitsidihana andro maromaro any amin'ireo nosy.
Matetika miandry anao ao amin'ny seranam-piaramanidina Kawthaung ny masoivoho, manampy anao mameno ireo antontan-taratasy ary hitondra anao any amin'ny sambo. Ireo fitsangantsanganana an-tsambo ireo dia manaraka ny làlan-kaleha izay hajaina raha tsara ny toetrandro, fa misy hatrany ny fiovana. Mazava ho azy fa misy mpitari-dalana ao anaty sambo izay manome anao vaovao momba ny fitsangantsanganana, izay hitanao sy tsidihinao ary mpandika teny miaraka amin'ireo nosy. Tena mahaliana.
Amin'ny ankapobeny, ny zotram-piaramanidina fototra dia manomboka amin'ny atsimo indrindra ka hatrany andrefan'i Kawthaung. Amin'ity faritra ity dia misy trano fandraisam-bahiny telo, ny Myanmar Andaman ao amin'ny Nosy MacLeod, ny Nyaung Oo Phee misy fivarotana lafo vidy ary ny Boulder Bay Eco Resort ao amin'ny Nosy Boulder. Safidy lafo vidy izy ireo izay misokatra manomboka ny volana oktobra hatramin'ny faran'ny volana aprily.
ihany koa afaka manao dia fohy ianao, fitsangatsanganana antoandro, mankany amin'ireo nosy avy any Kawthaung sy avy ao amin'ny tanànan'i Myeik. Ny fitsangantsanganana sasany aza mandany alina amin'ny tranolay any amin'ny nosy ary mora kokoa noho ireo trano fivarotana lafo vidy ireo safidy ireo. Misy aza ny fitsangantsanganana an-dranomasina mora vidy kokoa isan'andro manerana ny nosy fa maharitra andro maromaro izy ireo.
Nilaza izahay fa misy nosy 800 ka rehefa mikasa ny hanao dia mankany amin'ny Nosy Mergui na Merki ianao dia mila misafidy. Inona avy ireo toerana itodiana malaza indrindra? Eto isika, mikendry:
Nosy Lampi: Is a valan-dranomasina nasionaly ary iray amin'ireo nosy malaza indrindra ho an'ny mpitsidika satria super biodiverse izy io. Izy io dia misy honko, morontsiraka, haran-dranomasina ary renirano masina hanjonoana.
Nosy Nyaung Wee: fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Nosy Buddha. Betsaka ny tanàna ao Olona mikorisa ary azo tsidihina izy ireo hianatra momba ny kolontsainy. Taloha izy ireo dia niaina bebe kokoa teny amoron-tsiraka, amin'ny sambo mahazatra azy ireo, saingy vao tsy ela akory izay dia noraran'ny governemanta izy ireo ka nandritra ny fotoana kelikely dia betsaka kokoa ny vohitra any afovoany noho ny eny ambonin'ny ranomasina.
Nosy Myauk niNy olona tena tsara dia mipetraka ihany koa eto, izay anasana ny mpitsidika hiresaka, handika izany amin'ny fomba mitovy, tsy dia betsaka ny mpizahatany ka hahatsapa ho toy ny vahiny ianao.
Phi Lar Island: ho hitanao eto ny morontsiraka tsy misy fandraisana olona, ​​fotsy sy lao miaraka amin'ny haran-dranomasina miloko, mety amin'ny filentehana sy snorkeling.
Nosy 115: Fantatra ihany koa amin'ny nosy Frost. Manana a fotsy fotsy rano madio mangatsiaka sy mafana, be vato harana ary trondro tropikaly an-jatony. Io no nosy tsara indrindra ho an'ny snorkeling, antsitrika, kayak, ary hamakivaky ny ala.
Burma Banks: Iray amin'ireo toerana fisitrihana tsara indrindra any Azia atsimo atsinanana rehetra. Eo amin'ny ilany andrefan'ny nosy izy ireo, izay hidiran'ny takelaka kontinanta mankany amin'ny ranomasina. Tany misy halalin'ny lalina sy antsantsa.
Black Rock: Izy io koa dia tranonkala ankafizin'ny busos. Ny vato mitsangana dia manintona ihany koa ny voron-dranomasina, fa misy fina sy antsantsa ao anaty rano.
Cave Shark: Izy io dia vatolampy telo izay mipoitra sahabo ho 40 metatra miala ny ranomasina ary fonenan'ny fiainana an-dranomasina marobe na amin'ny vatolampy ihany na amin'ny manodidina azy anaty rano. Andro fisitrika tontolo andro ary tsy azonao fantarina tsara ilay tranonkala. Raha buso tena tsara ianao dia misy lava-bato goavambe aza miafara amin'ny lava-bato arovan'ny antsantsa volondavenona ...
Nosy Little Torres: Manodidina ireo nosy mahafinaritra ireo dia misy haran-dranomasina tsara tarehy, samy hafa endrika.
Farany, ankoatry ny fitsangantsanganana an-tsambo, morontsiraka, antsitrika, fitsangatsanganana ala na snorkeling, ny Nosy Mergui dia manome ny fahafaha-manao mandeha manarato. Amin'ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo izay fahita indrindra, noho izany ny zavatra niainana dia tanterahina tanteraka amin'ny hevitra hoe manjono sy mahandro ny sakafonao manokana amin'ny faran'ny andro.
Ary ahoana? Alao an-tsaina hoe eo an-tsambo ianao, amin'ny andro rehetra, ny moron-dranomasina lavitra, nosy, ranomasina, masoandro ... ary eo ianao, amin'ny zoro kely eto amin'izao tontolo izao. Fialan-tsasatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » firenena » Myanmar » Ny Nosy Mergui, harena miafina any Birmania